ताप्लीमा सडक,विद्युत,स्वास्थ्य,शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने योजना छः अध्यक्ष थापा - नयाँपुल अनलाइन डटकम
प्रकाशित मिति : Sunday, September 15, 2019 nayapulonline
काठमाडौं । उदयपुर जिल्लाको ताप्ली गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुन उद्धवसिंह थापा । तत्कालिन नेकपा एमालेबाट गाँउपालीका अध्यक्षमा निर्वाचित थापा सम्वृद्ध ताप्लि बनाउने अभियानमा छन । आर्थीक बर्ष २०७६/७७ मा गाउपालीका भवन,वडा कार्यलय ब्यस्थापन, बिद्युत,खानेपानी, सडकस्त्तरोन्ती लागायतको मुख्य योजनाहरु रहेका छन । प्रस्तुत छ अध्यक्ष थापास ताप्ली गाउँपालिकाको विकास निर्माण, समस्या अनि चुनौतीका बारेमा असल संचारका नारायण श्रेष्ठले गर्नु भएको कुराकानीः
स्थानीय निकायको निर्वाचनपछी ताप्ली गाउँपालिकाका जनताले महशुस गर्ने गरी के के कामहरु भईरहेका छन् ?
हिजो कर्मचारीहरु थिए, आज जनप्रतिनिधिहरु आएका छौ । जताले जिल्लाको सेवा अव गाउँमै पाएका छन् । पहीलेको तुलनामा बिकासको कामले पनी तिब्रता पाएको छ । भौगोलिक विकटता भएकाले गाउपालीकामा आन्तरीक आयश्रोत त छैन । केन्द्रको बजेट अनुसार नै गाँउपालीकाको बिकास गर्नु परेको छ । तरपनी गाउँपालिकाकोे पञ्चबर्षीय एकिकृत गुरुयोजना तयार भईसकेको छ । गुरुयोजना अनुसार सडक, विद्युत, खानेपानी जस्ता आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएका छौं ।
गाँउपालीकाको ५ वटै वडामा सडक विस्तार गरेका छौ । अब नयाँ सडक बनाउने भन्दा पनी बनेका सडकहरुको स्त्तरोन्नती गरीने छ । खानेपानीका काम धमाधम भइ रहेको छ । पानीका लागि सुनकोशीबाट लिफटिङ् प्रकृया अघि बढाउनेकार्य भइरहेको छ ।
११ केबिको राष्ट्रिय प्रशारण लाईनबाट सम्पुर्ण वडामा विद्युत जडान गर्ने कार्य पनी भइरहेको छ, उक्त काम आगामी बर्ष भित्र सम्पन हुनेछ । त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषी, पशु व्यवस्थापन लगायतको कुरा गुरुयोजनामै समावेश भएका छन ।
संचारको क्षेत्रमा गाउँपालिकामा ईन्टरनेट सेवा बिस्तार भएको छ । गाउँपालिका ४ ठानागाउँमा राखिएको नेपाल टेलिकमको टावरमा रेडियो लिंक जडान गरी गाउँपालिकाको कार्यालयमा ईन्टरनेट सेवा सुचारु गरिएको छ । इन्टरनेट सेवा संचालनमा आएपछि इमेल खोल्न र लेखाको सूत्र सफ्टवयर खोल्न कटारी जानु पर्ने बाध्यताबाट मुक्त भएको छ । ईन्टरनेट सेवा सुरु भएपछि सूचना आदानप्रदानमा सहज भएको छ ।
कृषीका लागि नीति निर्माण गर्ने पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्ने गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने त्यसै गरी प्रविधिको विकासमा जोड दिईरहेका छौं । गाउपालीकाले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम अन्र्तगत सुन्तला, कागती लगायतको अमिलो जातको फलफुल उत्पादन हुने क्षेत्रमा गाँउपालीकाले बिरुवा बितरण गर्ने योजना रहेको छ । सुन्तला र कागती नहुने ठाँउमा आप, लिच्ची, कटहर लगायतको बिरुवा बितरण गर्ने योजना रहेको छ । त्यस्तै अदुवा,बेसार, अलैचि लगायतको मसला खेतीका बिरुवाहरु पनी बितरण गर्ने गाँउपालीकाको योजना रहेको छ ।
गाँउपालीकामा उद्यमी बन्न चाहनेले के कस्ता अनुदान पाउछन् ?
गाँउपालीकाले उद्यमी बन्न चाहने हरुका लागी अनुदान दिने योजन बनाएको छ । पशुपालन गर्न चाहने उद्यमीहरुलाई गोठ नीर्माण गरीदीने, लगायत पशुपालनलाइए प्रोत्साहन गर्न ५० प्रतिशत अनुदान समेत दिने गरेको छ । त्यस्तै कृषी उद्यमीहरुको लागी पोखरी नीर्माया गरीदीने लगायत कृषी सामाग्री खरीदमा ५० प्रतिशत सम्म अनुदान दिने योजना गाँउपालीकाको रहेको छ ।
गाँउपालीकामा शिक्षाको अवस्था कस्तो छ ?
ताप्लीको शिक्षा क्षेत्र भद्रगोल छ । ताप्लीको ठूलो समस्या शिक्षा क्षेत्रको हो । हिजोका दिनमा स्वीकृति दिएका विद्यालयहरू आज बन्द भएका छन् । ती विद्यार्थी नभएका विद्यालय पनि जनप्रतिनिधिलाई जिम्मा लगाइएको छ,जसलाई समेट्न शिक्षा ऐन बनाउन सकेका छैनौँ । नियमावली र कार्यावधि बनाएर काम गर्न बाध्य छौँ । यसले तनाव बनाएको छ । शिक्षक दरबन्दी मिलान र विद्यालय मर्ज गर्न सकेका छैनौँ । कसरी मर्ज गर्ने भनेर ऐन बनाउन खोजिरहेका छौँ तर बनाउन सकेका छैनौँ । विद्यालयमा विद्यार्थी अनुसार शिक्षक छैनन् । स्थायी र राहतका शिक्षक नगरपालिका क्षेत्रका विद्यालयमा केन्द्रित छन् । कोही शिक्षक संगठनको बलमा आएका छन भने कोही विभिन्न वहाना बनाएर सुविधा सम्पन्न विद्यालय केन्द्रित भएका छन । मैले पटक पटक जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मार्फत कुरा उठाएको छु । जिल्लामा भएका शिक्षकको दरबन्दी सबै समायोजन गर्न माग राखेको छु ।
अहिले ताप्ली गाउँपालिकाका समस्याहरू के के छन ?
ताप्ली भौगोलिक रूपमा विकट मानिन्छ । यहाँका सडकहरू हिउँदमा चल्ने र बर्खायाममा बन्द हुने गर्छन् । सञ्चारको अवस्था पनि त्यस्तै छ । टेलिफोन टावर पनि गतिलो छैन । जहाँ पायो त्यहीँ मोबाइल लाग्दैन । गाउँपालिकामा विद्युत सेवा दिन सकेका छैनौँ । स्थानीयस्तरमा निर्माण गरिएको हाइड्रोपावरले काम गरिरहेका छौँ। कार्यालय सञ्चालनका लागि पनि विद्युतको अभाव छ । जनता पनि सोलार टुकीको भरमा छन् । यो यहाँको ठूलो समस्या हो । यसलाई सामाधान गर्दा ताप्लीको आधा काम सकिन्छ भन्दा हुन्छ ।
उदयपुरको ताप्ली गाँउपालिकालाई कसरी चिन्न सकिन्छ ?
यो गाउँपालिका खासगरी विकट भौगौलिक क्षेत्र भएको गाउँपालिका हो । यहाँ लेकदखी वेसींहरु समेत छन् । त्यसकारण यहाँ चिसोदेखी गर्मी सम्मको अनुभूति गर्न पाईन्छ । ताप्लीपोखरीबाट सगरमाथादेखि अन्य हिमशृङ्खलाहरु समेत अवलोकन गर्न सकिने भएकाले यो पर्यटकिय गाउँपालिकाको पनि सम्भावना बोकेको गाउँपालिका हो । सुनकोशी नदी पोखरीसम्मको उचाईलाई पर्यटनको सम्भावना अध्ययन गरी विकास गर्न सकिने गाउँपालिका हो ।
ताप्ली पोखरीमा अध्यक्ष उद्धवसिंह थापा
गाउँपालिकाले भिजीट नेपाल २०२० को लागी के कस्तो योजना ल्याएको छ ?
ताप्ली पोखरी र सुनकोसी नदीमा विशेष पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने लक्ष्य छ, जुन जिल्लाकै नमुना बनाउने हो । गाँउपालीकाको वडा नं २ मा अवस्थीत एतिहासीक स्थल ताप्लेपोखरी लाई पर्यटकीय स्थल बनाउन गाँउपालीका लागी परेको छ । उक्त पोखरीको आफ्नै बिषेशता रहेको छ । ताप्ले पोखरीमा कहिल्यै पानी सुक्दैन भन्ने धार्मी मान्यता रहेको छ । उक्त पोखरीको प्रचार प्रसारको कामलाई पनी तिब्रता दिईएको छ । यसको विकासका लागि पनि एकिकृत गुरुयोजनामै समेटीएकोले गुरुयोजना अनुसार काम पनी भईरहेको छ ।
ताप्लेपोखीमा भ्यु टावर निर्माणको कार्य पनी अघि बढीसकेको छ । उक्त भ्यु टावरबाट हिमाल लयागत प्रदेश न.१,२ का जिल्लाहरुलाई अवलोकन गर्न सकीन्छ । त्यसैगरी नेपाल सरकार समक्ष पोखरी अंकित टिकट छाप्ने प्रकृया पनि अघि बढाउने छौं । पोखरीका लागि डिपीआर, शीवको मूर्ति निर्माणको काम अघि बढाएका छौं । त्यसपछि प्रचार प्रसारलाई पनि जोड दिने छौं । विशेष गरी पोखरीलाई पर्यटन विकासमा जोड दिंदै जाने छौं । उक्त योजनाको लागी यो बर्ष ५० लाख बजेट समेछ बिनीयोजन भईसकेको छ ।
त्यस्तै गाँपालीकाको वडा न. १ ककनिमा खोटाङको हलेसी गुफा आकारकै स्थल पनी रहेको छ । उक्त गुफलाई पनी प्रचार प्रसारमा जोड दिने गाँउपालीको योजना रहेको छ ।
अन्त्यमा गाँउपालीकाका जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
हामी सम्वुद्ध ताप्ली बनाउने अभियानमा छौ । चुनावमा गरीएका प्रतिबद्धता अनुसार काम हुन सकेको छैन । तरपनी म निर्वाचित भएर आएपछि कार्यान्वयन तहमा कठिनाइ आएका छन् । अहिले अप्ठ्याराबीचमा पनि जनताको सेवा गरिरहेको छु । ताप्ली गाउँपालिकामा खानेपानी, सडक, बिजुली, स्थास्थ्यचौकी जस्ता समस्या थिए । यस्ता कुरामा विशेष गरेर लागिपरेको छु । ती योजनाहरू पूरा गर्न ठोस योजनाहरू ल्याएको छु । तत्काल जनताले राहातको महसुस गरेका छन, महसुस गराएको छु ।
जसरी सिंहदरबारको अधिकार गाँउगाँउमा भनिएपनी नीती नियम र ऐन कानुनको कारण पुर्ण अधिकार स्थानिय तहले नपाउदा काम गर्न गाह्रो भइरहेका छ । गाउपालीकाको गुरुयोजना समेत बनिसकेकोले अबको २ बर्ष भित्र हामी सम्वृद्ध ताप्ली बनाउने सपना पुरा गर्नेछौ ।
त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकालाई ब्यवसायिक फलफुल खेतिमा अघि बढाउदै मेयर बुढा..
जिल्लाकै समृद्ध बन्दै ओखलढुंगा मोलुङ गाउँपालिका